“Marwadu Qaranka Waxba Imay Farin, Imana Fari-doonto” Wasiir Duur | Somaliland.Org
December 29, 2012	Hargeysa(Somaliland.Org) -Wasiirka arrimaha gudaha Md. Maxamed Nuur Caraale (Duur), ayaa ka jawaabayn eedayn uu u jeediyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, oo Arbacadii laga reebay diyaarad uu ka raacayay madaarka Berbera oo ku socotay magaalada Muqdisho, isagoo Mr. Cabdiqaadir ku eedeeyay wasiir Duur, inuu bixiyay in diyaaradda laga soo reebo. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, oo Geeska Afrika waraysi la yeeshay markii diyaaradda, laga soo reebay, ayaa isagoo ka hadlaya eedaynta uu wasiirka daakhiliga u jeediyay, wuxuu Cabdiraxmaan Cabdiqaadir yidhi “Sidaan meesha ka fahmayna waxa laygu yidhi warkaas waxa soo bixiyay wasiirka daakhiliga, markii wasiirka daakhiliga iyo wasiiro kale la waraystayna waxa la yidhi arintan madaxtooyada ayay ka timid oo wasiirka daakhiligu waxa uu ku dacwooday marwada madaxweynaha ayaa aniga I soo fartay in diyaaradda laga reebo, wali iyagii ayaa isku mashquulsan oo meel ay ku tiiriyaan waa ay la’yahiin, meel ay arintaasu fadhiisan doontana garan maayo.” Jawaabta Wasiir Duur
Intaas tegitaankooda iyo ka imaatinkoodu waa mamnuuc, markaas qofka siyaasiga ah ee sii socdaa haddii aanu dambi gelin noqo ayuun baa la odhanayaa, labadaas qof [Cabdiraxmaan Cabdiqadir iyo Maxamuud Siciid] oo keliya maaha ee masuuliyiin kale oo badana waa la celiyay, waa shaqadda laanta socdaalka oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amarka ay qabto.” Isagoo Wasiirka daakhiligu ka sii hadlaya hadalkii Cabdiraxmaan Cabdiqaadir uu ku sheegay inay marwada koowaad Aamina Sheekh Maxamuud Jirde bixisay amarka diyaaradda lagaga soo reebay wuxuu Wasiir Duur yidhi “Waxa kale oo jira sida wax loo dhigay iyo xajiimaynta qof aan hawl-maalmeedka dawladeed meelna ka soo gelin sida marwada oo ah maamus qaran. Marwadu Maamulka dawliga ah amar kuma leh, ee maamuus ayay ku leedahay, Marwadu amar ma bixiso, mana bixin karto meelna kama soo gasho, imanay amrin, imana amri karto. Markaas waxaan leeyahay marwadu qaranka maamuus mooyee maamul kuma laha, waxba imay farin, imana fari doonto, ciddii warskaas tidhina waa cid aan xishoonayn oo aan dhaqanka iyo maamulka iyo milgaha midna garanayn, markaas arrinkasi ma jirin mana jiri karo, mana dhicin, mana dhici karo.” Farriinta Saxaafadda Ugu dambayn, waxa uu wasiirka arrimaha guduhu farriin u diray warbaahinta maxaliga ah ee dalka, waxaanu yidhi “Warbaahintu, waa inay ilaalisaa, milgaha sharafta iyo asluubta oo qofkay wax ka qorayso magaciisa la qoraa, qof aan la waraysan in magaciisa la soo qoro maaha. Markaas aniga warbaahin i waraysatay oo hawshaas I weydiisay ma jirto, warbaahintu ciday been ka xigato ha qorto oo ha tidhaahdo hebel ayaa sidaas yidhi. Waxaan kula talinayaa wixii la dhawri jiree sharaf lahaa in la dhowro, marka muranku iyo wax ka sheegu maamulka yahay, inaan guryaha loo gudbin, taasna waan idin kula talinayaa.” XIGASHO: WARGEYSKA GEESKA AFRIKA
Previous PostUrurka Haweenka ee Badar wanaag oo lacag caawimo ah ugu deeqay Caruurtii uu ka baxay Mujaahid FanaxNext PostMadaxweynaha Somaliland Oo Xadhiga ka jaray waddo Laami ah oo laga hirgeliyay xaafadda Daami	Blog